11-ka Qalab ee Tijaabada A/B ugu Fiican ee ay tahay inaad Adeegsato 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/11-ka Qalab ee Tijaabada A/B ee ugu Fiican ee ay tahay inaad isticmaasho 2021
11-ka Qalab ee Tijaabada A/B ee ugu Fiican ee ay tahay inaad isticmaasho 2021
Haddi aad tahay xafiis 20 qof ah ama aad wadato dhammaan hawlaha keligiis, soo jiidashada dhagaystayaashaada waa lama huraan.
Laakiin ma rabto inaad dadka soo jiidato oo keliya, sax? Waxaad doonaysaa inaad u beddesho macaamiil daacad ah.
Beddelka ayaa muhiim u ah guusha ganacsigaaga, iyo ogaanshaha sida loo kordhiyo fursadaha ay ku dhici karto waxay sameyn kartaa saameyn weyn.
Dhib malaha haddii aad hadda bilaabayso ama aad doonayso inaad sii waddo oo aad kordhiso heerarka beddelka ee hadda - Tijaabada A/B waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh u gaarto yoolkaaga.
Adigoo si habaysan u tijaabiya hal doorsoome markiiba, sida in muuqaal ama muuqaal uu soo jiito dareenka dhagaystayaashaada, waxaad heli kartaa waxa ay doorbidayaan dhageystayaashaada la beegsaday.
Si uu kaaga caawiyo hawshan, halkan waxaa ah liis 11 A/B ah oo qalab ah oo tijaabo ah si aad u wanaajiso istaraatiijiyadaada suuqgeynta dhijitaalka ah, u hesho jawaabo, oo aad ula xiriirto macaamiishaada ugu habboon.
1. VWO (Visual Website Optimizer)
VWO waa doorasho caan ah marka ay timaado imtixaanka A/B, iyo sabab wanaagsan.
Qalabkan wax-ka-beddelka leh wuxuu bixiyaa qalab dhammaystiran oo ah Kor-u-qaadista Heerka Isbeddelka (CRO) si ay kaaga caawiyaan inaad hesho xalalka aad u baahan tahay.
Mid ka mid ah sifooyinka ugu sarreeya ee qalabka baaritaanka VWO A/B waa dashboardka warbixinta ee awoodda leh.
Laga soo bilaabo, waxaad si dhakhso ah u qiimeyn kartaa natiijooyinka imtixaan kasta iyadoo lagu salaynayo nidaamka midabaynta gaarka ah.
Natiijooyinkan imtixaanku waxay kaa caawin karaan inaad fahamto dabeecadda isticmaalaha mareegta. Waxa kale oo ay kaa caawin karaan horumarinta khibrada macmiilka oo ay u keenaan ganacsi badan jidkaaga.
Qalabka tijaabinta VWO A/B waxa uu aad ugu haboon yahay dhexda ilaa ganacsiyada waaweyn waxana uu sumcad ku leeyahay taageerada 24-saac ee gaarka ah iyo adeegyada xalinta mushkiladaha.
Shirkadaha waaweyn, Hagaajinta badiyaa waa doorashada la door bidayo ee agabka tijaabada A/B ee ugu sarreeya.
Si kastaba ha ahaatee, hirgelintiisu waa sahlan tahay, oo ku habboon xitaa kuwa bilawga ah.
Marka lagu daro awoodaha tijaabada A/B ee Optimizely, waxa aad isku mar ku samayn kartaa imtixaano badan hal bog.
Muuqaalka Tifaftiraha Muuqaalku waa saaxiibtinimo-saaxiibtinimo iyada oo aan loo baahnayn waayo-aragnimo adeegsiga nooc kasta oo kood ah.
Bartilmaameedka sare, kala qaybinta, iyo sifooyinka shakhsiyaynta nuxurka ayaa sidoo kale lagu daray.
Gunno ahaan, waxaad u isticmaali kartaa Optimizely abka mobaylka iyo sidoo kale meelaha fariimaha la isku diro.
3. Ion Interactive
Ion Interactive waa goob loogu talagalay inay kaa caawiso inaad abuurto waxyaabo is dhexgal ah si aad si joogto ah u wanaajiso khibradaada macaamiishaada.
Waxa kale oo ay bixisaa imtixaan degdeg ah, isku dhafan oo A/B ah si ay ugu habboonaato.
Ma aha oo kaliya inaad abuuri karto dhammaan khibradahaaga isdhexgalka ee software-ka, laakiin waxaad sidoo kale tijaabin kartaa mid kasta si aad u aragto sida ay u qiimeeyaan daawadayaasha.
Waxaad tan ku samayn kartaa dhowr jeer oo keliya, adoo badbaadinaya wakhtiga kooxda oo aad si dhakhso leh ula xiriirto macaamiishaada.
Looma baahna horumariye ama xirfadaha codaynta midkoodna.
Si fudud u ururi xogta ku saabsan isdhexgalka (tusaale, infographics ama buugag-eegis), soo jiida macaamiil badan oo suurtagal ah oo u hagaaji suuq-geynta macluumaadkaaga si habboon.
Markaad hesho natiijooyinka tijaabada, waxaad u oggolaan kartaa software-ku inuu si toos ah u dejiyo hagaajinta ama u sameeyo gacanta, adiga oo ka dooranaya natiijooyinka.
U beddelashada xogta xeelado suuq-geyneed cusub waa waxa Omniconvert ku saabsan yahay.
Waxaad ku isticmaali kartaa meel kasta, adigoo ku socodsiinaya imtixaannada kala qaybsanaanta A/B ee miiskaaga, tablet-kaaga, ama aaladda moobaylka - meel kasta oo ay kuugu habboon tahay.
Sifada uu jecel yahay Omniconvert waa awooda lagu dejiyo xakamayntaada kuwa guulaystay imtixaankaaga A/B, kaa caawinta imtixaanada mustaqbalka.
Marka lagu daro awoodaha tijaabada A/B, waxaad isticmaali kartaa aaladaha madal ee sahanka shabakada, shaqsiyaynta, iyo qaybinta taraafikada.
Awoodaha kala qaybintan waxaa ka mid ah kala soocida habdhaqanka booqdaha, goobta juqraafiyeed, iyo qiyaaso kale oo kala duwan.
Haddii aad raadinayso qalab suuq-geyneed oo dhan oo dhan ah oo aad leedahay miisaaniyad sare oo aad ku shaqeyso, HubSpot's softiweerka buuxa ayaa adiga kuu ahaan kara.
Waxaa ku jira CRM, Hub Suuqgeynta (oo leh aaladda tijaabada A/B), Hub Iibka, iyo Xarunta Adeegga.
Qalabka HubSpot wuxuu ku fiican yahay ganacsiyada ku cusub tijaabada A/B. Waxa kale oo ay ku habboon tahay ganacsiyada raadinaya hab ay kula socdaan dhammaan natiijooyinkooda imtixaannada.
Si kastaba ha ahaatee, si gaar ah uma bixin kartid qalabka baaritaanka A/B. Taa beddelkeeda, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso kharashka qorshe xirfadeed, kaas oo ugu yaraan ku dhow $800 bishii.
Faa'iidada in lala socdo HubSpot waa in ay bixiso qalab dhamaystiran oo lagu daray hal nidaam kaas oo noqon kara waqti badbaadiye weyn.
6. AB Caano
AB Tasty waxaa loogu talagalay ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa ku cusub baaritaanka A/B ee aan u baahnayn awoodaha dheeraadka ah ee laga helayo qalabka kale ee liiskan ku jira.
Taas macnaheedu maaha in AB Tasty ay ka maqan tahay waxtarka, si kastaba ha ahaatee.
Waad dhisi kartaa oo aad wadi kartaa imtixaanadaada A/B adoo isticmaalaya tifaftiraha muuqaalka. Tifaftiraheeda fudud ee jiid-iyo-soo-celinta waxay badbaadisaa wakhtiga, iyo madalku waa mid aad u saaxiibtinimo-saaxiibtinimo guud ahaan.
Waxaad heli doontaa warbixino ballaadhan, shakhsiyaynta nuxurka, iyo sifooyinka beegsiga sare.
AB Tasty waxa kale oo ay la timaaddaa awood tijaabin funnel gaar ah oo kuu ogolaanaysa in aad isku mar tijaabiso dhawr bog.
Isbeddelka, waxaad awood u leedahay inaad dhisto kala duwanaansho badan iyo imtixaanno gaar ah oo ku wajahan baahiyahaaga gaarka ah.
Naqshaddeeda waxaa door biday kuwa khibrad u leh tijaabada A/B iyo agabka kale ee suuqgeynta ee horeyba.
Adeegso dhismeheeda ku habboon ee muuqaalka adoon gelin wax kood ah, ama u gudub galinta koodka gaarka ah si aad xoriyad dheeraad ah ugu hesho qaabaynta qaab dhismeedka imtixaankaaga.
Habab-gaab-soo-saareyaal ah ayaa sidoo kale la isticmaali karaa, sida doorashada walxaha carruurta ama xulashada weelasha.
Marka lagu daro tijaabada A/B, Beddelku waxa uu ogolyahay tijaabinta kala duwan, tijaabinta bogag badan, iyo qayb saretusaale ahaan, waxaad macaamiisha u kala qaybin kartaa cookies ama dhaqanka taariikhiga ah).
Tilmaamaha warbixinta adag iyo awoodaha is dhexgalka qalabka dhinac saddexaad (sida WordPress, HubSpot, iyo Shopify) sidoo kale waxay kordhiyaan faa'iidada Beddelka.
8. Tijaabada Nelio A/B
Kuwa idinka mid ah oo isticmaalaya WordPress si ay u xoojiyaan mareegahaaga, plugin-ka Tijaabada Nelio A/B waxa ay noqon kartaa waxa aad u baahan tahay oo dhan.
Samee imtixaanadaada A/B adoon waligaa ka tagin is dhexgalka WordPress.
Waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad dib u eegto falcelinta falanqaynta, qiimee khariidadaha, oo ka shaqeeyaan sidii aad u hagaajin lahayd natiijooyinka isla halkaas sidoo kale.
Marka lagu daro plugins kale oo qiimo leh oo WordPress ah, Tijaabada Nelio A/B waxay kor u qaadi kartaa istaraatiijiyada suuqgeynta guud waxayna kordhin kartaa heerarka beddelka.
Qalabkan tijaabada A/B wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa WooCommerce kuwa haysta dukaamada e-ganacsiga.
Plugins WordPress waxay bixiyaan adeegyo qiimo leh maanta, iyo Qalabka Tijaabada Nelio A/B waa doorasho wanaagsan oo lagu sameeyo imtixaanada A/B.
9. Zoho PageSense
Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe, kuwa cusub, ama qof kasta oo leh miisaaniyad suuqgeyn xaddidan ayaa ka faa'iideysan doona xulashada goobta Zoho PageSense.
Laga soo bilaabo, waxaad si guul leh u heli kartaa habab aad ku wanaajiso boggaaga, u abuurto shakhsiyaynta dadka la beegsanayo, iyo kordhinta heerka beddelka guud.
Qiimaha bishiiba wuxuu ku salaysan yahay tirada booqdayaasha bishiiba. Haddii aad leedahay in ka yar 10,000 oo soo booqda bishii, waxaad bixinaysaa heerka ugu hooseeya.
Weli waxaad marin u leedahay sifada madal ee buuxa, si kastaba ha ahaatee, iyadoon loo eegin tirada booqdayaasha.
Ku samee dhammaan baaritaankaaga A/B halkan adigoo isticmaalaya tifaftiraha muuqaalka.
Waxa kale oo aad marin u heli doontaa kala qaybsanaanta URL tijaabada, bartilmaameedka sareeyo iyo qaybinta (taas oo kuu ogolaanaysa inaad hesho wax aad u baahan tahay), iyo warbixin dabacsan.
Madalku waxa ay isticmaashaa xogta wakhtiga-dhabta ah, waxa ay bixisaa is-dhexgal isticmaale oo toos ah, oo waxa ay leedahay fidinta Chrome ku haboon ee aad isticmaasho.
Waxa kale oo aad si fudud ula dhexgeli kartaa codsiyada qolo saddexaad sida Google Analytics iyo codsiyada Zoho ee kala duwan.
Qalabka Beddelku waa meel wanaagsan oo laga bilaabo haddii aad ku cusub tahay hagaajinta heerka beddelka, laakiin waxay sidoo kale u adeegi kartaa kuwa u baahan wax dheeraad ah.
Bixinta tijaabada A/B iyo shakhsiyaynta, madalkan waxa ku jira tafatire muuqaal jiidis iyo hoos u dhigid si fudud loo isticmaali karo.
Tilmaamaha kale waxaa ka mid ah mishiinka tirakoobka, qoraal firfircoon, nudges, iyo autopilot si uu taraafikada ugu wareejiyo boggaga internetka ee waxqabadka ugu sarreeya.
Qorsheyaal kala duwan ayaa diyaar ah oo ku habboon baahiyahaaga gaarka ah.
Tusaale ahaan, qorshaha kooxdu waa kuwa si qoto dheer u socda ololayaasha CRO oo u oggolaanaya imtixaanno aan xadidnayn oo tiro kasta oo shabakado ah.
Guud ahaan, Beddelku waa qiimo weyn.
11. Kordhinta Google
Haddii aad raadinayso qalab tijaabo A/B oo bilaash ah, ku bilow isku-darka Google Analytics iyo Google Optimize.
Google Optimize waa qalab tijaabo ah oo A/B ah oo faa'iido leh halkaas oo aad ku abuuri karto, tijaabin karto, oo aad falanqayn karto noocyada kala duwan ee website-kaaga.
Waxa kale oo aad samayn kartaa imtixaano URL kala qaybsan oo fudud iyo tijaabooyin kala duwan sida la rabo.
Haddii aad u baahan tahay wax badan, waxaad sidoo kale tixgelin kartaa inaad iska diiwaan geliso Optimize 360, kaas oo ah nooc lacag ah oo bixiya awoodo tijaabo oo dheeri ah iyo adeegyo kale oo kala duwan.
Isku soo wada duuboo: Kordhinta heerka beddelka adiga oo isticmaalaya Aaladahan Tijaabada A/B
Aaladda tijaabada A/B waxay noqon kartaa lammaanahaaga sirta ah raadinta si aad u dhammaystirto boggaaga, nuqulka, ama alaabtaada.
Isticmaalka mid ka mid ah qalabka ku jira liiskan ayaa kaa caawin kara inaad samayso go'aamo xog ogaal ah oo ku kordhi heerka beddelkaada si sahlan oo kalsooni leh.
Ka dib oo dhan, heerkani waa calaamad muujinaysa waxtarka suuq-geynta iyo iibka hadda.
Haddii taada aysan u shaqayn sida aad ugu baahan tahay, miyaan la joogin waqtigii la ogaan lahaa sababta?
Soo ogow waxa kooxdaadu samayn karto kordhi heerka beddelka Adigoo gelaya ebook-keena is-dhexgalka maanta!
Sida looga soo diro Instagram DM-ka kumbuyuutarkaaga (PC ama Mac)
Shaqooyinka suuqgeyneed ee warbaahinta bulshada oo kor u kacaya